Adobe Photoshop Express dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao 2 | Famoronana an-tserasera
Afaka manova ny haben'ny mari-drano ao amin'ny Adobe Photoshop Express ianao izao
Adobe Photoshop Express dia nohavaozina ho an'ny finday miaraka amina andiam-panatsarana izay mendrika hanasongadinana ny safidy ankehitriny hahafahana manova ny haben'ny mari-drano. Mety ho toy ny antsipiriany kely izany, rehefa miasa miaraka amin'ireo sary izay tokony ampakarintsika ao amin'ny bilaogy na tranonkala iray, dia mety ho zava-dehibe io.
Ary io no teo aloha ny fividianana customization dia tena mahia saika mila miala amin'ny kinova lehibe amin'ity programa famolavolana lehibe ity. Tsy ny safidy fampifanarahana mari-drano ihany no nohatsaraina, fa misy safidy maro kokoa.
Ary na dia tsy lavorary tanteraka aza ny fanaingoana ny mari-drano ao amin'ny Photoshop Express, satria raha afaka mametraka ny marika tadiavintsika isika, eny izao azontsika atao ny manova azy io. Fampisehoana iray notakin'ny fiarahamonina ary naheno i Adobe hitondra izany ao amin'ity fanavaozana vaovao ity.
Ny zava-baovao iray hafa dia ny nohatsaraina «Vignette» hanomezana sary vazivazy vokariny lehibe kokoa amin'ny fifehezana mazava ny penina sy ny boribory. Ny atiny vaovao koa dia nampidirina niaraka tamin'ny fomba an-tsoratra maro izay nampiana tao amin'ny app Adobe iOS sy Android ary fantatsika avy amin'ny Photoshop Express.
Ka ireto misy pitsopitsony vaovao vitsivitsy manampy traikefa tsara kokoa avy amin'ilay antsoina hoe finday na tablette amin'ireo rafitra miasa ireo izay miparitaka be ary manangona olona an-tapitrisany mampiasa ny fitaovany izy roa.
Ny dikan'ny Photoshop Express miaraka amin'i 5.9.571 ity vaovao ity. Ho an'ny Android dia azonao atao mandalo ity rohy ity mampidina ny APK ary avy eo miandry raha afaka manova ny haben'ny mari-drano ho an'ny sarinao.
Ho anao izay mampiasa ny kinova lehibe aza adino ity fampianarana ity hanovana endrika borosy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Afaka manova ny haben'ny mari-drano ao amin'ny Adobe Photoshop Express ianao izao
Mamorona ny endrinay manokana amin'ny alàlan'ny sary na sary.